ခက်မာ: ပုန်းလျှိူးနေသောဝိညာဉ်များ 1. 2.
အရိုးပြိုင်းပြိုင်းဘ၀ဖြင့် ကြောက်မက်ဖွယ်အအေးဒါဏ်ကို အံကြိတ်တင်းခံခဲ့သော သစ်ကိုင်းခြောက်များ အားထိုးခွဲထွက်လာတာက အလွန်နုညံ့သောပွင့်ဖတ်ပွင့်လွှာ များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပန်းဖူးတွေဖြစ်သည်။ထိုပန်းပင်တွေက နွေဦးမှစ၍အစွမ်းကုန် ပွင့်လန်းလှပစေဖို့ ခြောက်ခြားဖွယ်ဆောင်း၏အအေးဒါဏ်အောက်မှာ အားယူခဲ့သည်
ပေါ့။ နှင်းထုဖုံးလွှမ်းသောသစ်ကိုင်းခြောက်များအတွင်းမှာ ‘ နေသေးသပ’ ရယ်လို့
နွေဦးမှစ၍ စုံလင်များပြားသောပန်းများကိုပွင့်စေပြန်သည်။နွေဦးကမျက်နှာမလိုက်ပါ။ ကျမ ခြံထဲကိုလည်းရောက်လာ၍ ကျမပျိုးထားသောပန်းတွေကိုပွင့်စေသည်။ ဒါပေမယ့် မတည်မြဲတတ်သောသဘာဝတရားအရ ကျမပန်းများ ကလည်းအမြဲတန်း
တော့လှမနေနိုင်ပါ။ ရှဉ့်ကလေးတွေကတချို့ပွင့်ဖတ်တွေကိုလာစားသည်။ ငှက်ကလေးတွေက အညွှန့်အညှောက်တွေကိုထိုးဆိတ်သည်။ ရွက်ကြွေရာသီက လည်းသစ်ပင်များ၏အရွက်တွေကိုခြွေချ၍ မကြာခင်ကြွေလျောရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပန်းများကို နမိတ်ပြသည်။
မကြာခင်ဆောင်းရာသီရောက်လာဦးတော့မည်။ အအေးဒါဏ်နှင့်နှင်းထုက ပန်းများ၏ ဇီဝိန်ကိုခြွေဖို့ကြိုး စားကြလိမ့်မည်။ ပန်းပွင့်ဖတ်လွှာတွေကလည်းအားမတန်မာန်
လျော့၍ကြွေလျောကြရမှာပေမယ့်သူတို့၏ဇီဝစွမ်းအားများကိုအရိုးပြိုင်းပြိုင်းသစ်ကိုင်း များထဲတွင်သိုလှောင်၍ ဆောင်း၏ဒါဏ်ကိုအံကြိတ်ခံကြဦးမည်။ နောက်တနွေ
ပြောင်းလဲကာ လူသားတို့အားကြည်နူးပျော်ရွှင်စေဦးမည်။ ဆောင်း၏အအေးဒါဏ်နှင့်
နှင်းထုက ပန်းများ၏ပွင့်ချပ်ပွင့်လွှာတွေကိုခြွေနိုင်ပေမယ့် သစ်ကိုင်းခြောက်ရိုးတွင်း
ခြင်ဆီထဲတွင်ကိန်းအောင်းနေသော ရုပ်ဒြပ်မဲ့ဝိညာဉ်အင်အားကိုတော့ ဘယ်လိုမှ မဖျက်ဆီးနိုင်ပါ။
ကျမတို့တတွေလည်း နွေဦးတဖန်ရောက်လာချိန်ကိုမျှော်၍ ရာသီကြမ်းဆောင်းများ ကိုဖြတ်သန်းနေကြရသည်ပင်။အနှောက်အယှက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားရသော
ပန်းတွေနေရာမှာအစားထိုးဖို့ ပန်းပင်အသစ်တွေစိုက်နေကြရသည်ပင်။ အပျက်အစီး ကိုစိတ်ပျက်ပြီး ထပ်မပျိုးလျှင် ပန်းလှလှတွေကိုကြည့်၍ကြည်နူးရသော အရသာ ဆုံးရှုံးရမှာ ကျမတို့ပဲဖြစ်သည်။ ဆောင်းကိုကြောက်၍ (မုန်း၍) လက်ပန်းကျနေလျှင်
နွေဦးကိုမကြိုနိုင်မှာ ကျမတို့ ပဲဖြစ်သည်။
နွေဦးများလှဖို့ဆိုတာ ဆုတောင်းနေရုံနှင့်တော့မပြီးပါ။ ဘ၀၏ရာသီကြမ်းများအတွင်း တွင် ပန်းများအားပွင့်လန်းလာစေနိုင်သောဝိညာဉ် အင်အားတွေကို ကျမတို့ခန္ဒာကိုယ် ထဲမှာ သိုလှောင်ထားနိုင်သမျှတော့ ကျမတို့ နွေဦးတွေကလည်းပန်းစုံပွင့်၍လှနေ လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
a nice and encouraging post!
Can I please read this post in English version?